कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी : यस्ता छन् बैठकका एजेन्डा ?
काठमाडौं– सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर वैठक बस्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु छान्ने जिम्मा माओवादीले तीन जना नेतालाई दिएको थियो । मन्त्री
गृह फेरी माओवादीको भागमा, यस्तो छ मन्त्रालयको वांडफांड (सुचीसहित)
काठमाडौं– माओवादी केन्द्रमा सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित पार्टीका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलले गृहसहित सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो
नेपाल चीन जोड्ने रेल योजनाको खाका तयार : कहिले आउला चिनियां रेल ?
पुर्व कानूनमन्त्री नै बन्ने भए प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार
काठमाडौं –पूर्वकानूनमन्त्री अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरेललाई महान्यायाधिवक्ता बन्न प्रस्ताव गरेका छन् । खरेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्विकार गरेको
माओवादी र एमालेबीच भयो ऐतिहासिक सात बुंदे सहमती
माओवादीमा प्रचण्ड बने संसदिय दलको सर्वसम्मत नेता
काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदिय दलको नेता चयन भएका छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डलाई आईतबार सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरिएको हो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को संसदीय
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन बालकोट पुगिन् चिनियाँ राजदूत
माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री किन पठाएन? यस्तो भन्छन् महरा
काठमाडौं– वाम गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि एमाले र माओवादीका नेता, कार्यकर्तामा खुसी छाएको थियो। १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न चुनावबाट बहुमत प्राप्त वाम